I-63% isaphulelo kwi-CHO yeFashoni kunye neZikhuphoni zendlela yokuphila kunye neeKhowudi zePromo
CHO Fashion and Lifestyle Iikhowudi zekhuphoni
Iipesenti ezingama-10 kwiiOdolo zakho I-CHO yeFashoni kunye nendlela yokuPhila kunye neKhowudi yokuThengisa ngo-Okthobha ka-2021 zihlaziywa kwaye ziqinisekisiwe. I-CHO ephezulu yanamhlanje yeFashoni kunye neKhowudi yokuKhuthazwa kweNdlela yokuPhila: 20% Off Off Essentials Summer. Iikhowudi zoku-1 eziPhezulu. Izihlangu.
I-15% yesaphulelo kwintengiso kaJanuwari I-50% yeKhowudi yokuThengisa CHO Imfashini kunye neNdlela yokuPhila ngo-Okthobha u-2021. Kwi-intanethi ephezulu kwi-50% Cima i-CHO yeFashoni kunye neNdlela yokuPhila kunye neekhowudi zokunyusa ngo-Okthobha u-2021. kwivenkile ekwi-intanethi CHO Imfashini kunye neNdlela yokuphila.
Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-60 + ukongeza kuma-10% kwiOda yakho Fumana iidili ezigqwesileyo kunye neekhuphoni ze-CHO yefashoni kunye nendlela yokuphila. Bamba isaphulelo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-35 usebenzisa iiKhowudi zokuNgqinisisa.
I-15% ikhutshiwe kwiBarbour naseBarbour International Phezulu kwi-Intanethi kwi-15% Cima i-CHO yeFashoni kunye nendlela yokuphila kunye neekhowudi zokunyusa ngo-Okthobha u-2021. Ungafumana ezona zilungileyo CHO Imfashini kunye neNdlela yokuPhila 15% Cima iikhowudi zokwazisa kunye neekhowudi zezaphulelo zokugcina imali kwivenkile ekwi-intanethi CHO Imfashini kunye nendlela yokuphila. I-15% ishiye iodolo yakho. Cofa umnikelo ukuze ukope ikhowudi yekhuphoni. Khumbula ukuncamathisela ikhowudi xa uphuma.
I-10% Ikhuphe i-oda yakho-kufuneka ungene kwiakhawunti yakho I-60% yeKhowudi yokuThengisa CHO Imfashini kunye neNdlela yokuPhila ngo-Okthobha u-2021. Kwi-intanethi ephezulu kwi-60% Cima i-CHO yeFashoni kunye neNdlela yokuPhila kunye neekhowudi zokunyusa ngo-Okthobha u-2021. kwivenkile ekwi-intanethi CHO Imfashini kunye neNdlela yokuphila.
Ukongeza kwi-10% kwiiNdawo eziPhezulu Fumana iikhowudi zekhuphoni ezingama-41 ze-CHO kunye nendlela yokuphila kunye neekhowudi zokuthengisa kwiCouponBirds. Cofa ukonwabela izivumelwano zamva nje kunye neekhuphoni ze-CHO Fashion & Lifestyle kwaye wonge ukuya kuthi ga kwi-60% xa uthenga ekuphumeni. Thenga i-cho.co.uk kwaye wonwabele ukonga kwakho ngoSeptemba, 2021 ngoku!
CHO Fashion and Lifestyle is rated 4.9 / 5.0 from 48 reviews.